Google na-akwado imeghe ụlọ ahịa nke mbụ ya | Gam akporosis
O yiri ka Google na-akwadebe ịbanye ụwa nke retail. Dị ka otu akụkọ si kwuo, ụlọ ọrụ ahụ ga-emechi nkwekọrịta iji nweta ụlọ ahịa gọọmentị mbụ ya ebe ị nwere ike ịchọta Pibi ezinụlọ mobiles, Pixelbook laptọọpụ na ọtụtụ ndị ọzọ.
Google nwere ike ọbụna ire ngwaọrụ site na ndị nrụpụta dị iche iche na-agba ọsọ gam akporo, Wear OS ma ọ bụ Chrome OS, ọ bụ ezie na ha agaghị abụ kpakpando nke ụlọ ahịa ahụ.
Dị ka akụkọ ahụ si kwuo, ụlọ ahịa ahụ gaara 1300 square mita n'ogo ma ga-adị n'etiti W 853 na 845 Randolph n'okporo ámá na Chicago si meatpacking district, na nso ụlọ ọrụ ha ugbu a.
Ọ gaghị abụ ihe ijuanya ma ọ bụrụ na Google amalite ụlọ ahịa ya, mgbe ọtụtụ nnukwu ụlọ ọrụ dịka Apple, Microsoft, Huawei, Samsung na ndị ọzọ nwere otu. Ugbu a Google nwere ọtụtụ ngwaọrụ, ụlọ ahịa retail ọ ga-abụ nhọrọ magburu onwe ya.
Nke a agaghị abụ oge mbụ enwere asịrị banyere ụlọ ahịa Google, dị ka akụkọ dị iche iche si kwuo, ụlọ ọrụ ahụ akagbuola atụmatụ maka ụlọ ahịa na oge abụọ dị iche iche; Oge mbụ akụkọ banyere lege nke ụgbọ mmiri dị na Treasure Island dị na San Francisco ebe Google ga-enwe ebe data, ọ bụ ezie na n'ikpeazụ ọ bụ naanị ngosipụta ngwaahịa, emesịa, ụlọ ọrụ ahụ nwetara ohere na New York na mgbe emechara ihe karịrị $ 6 nde dollar iji rụzigharị ebe ahụ, akachapụrụ echiche ahụ, n'ihi nke a bụ na A ghaghị iwere ozi ahụ na ndoputa ụfọdụ.
Google ka nwere nnukwu ọrụ ọ ga - aga ma ọ bụrụ na ọchọrọ inwe ụlọ ahịa dịka ndị ama ama ya, mana ịmalite ebe iji nwalee ngwaahịa ya ga - erite uru dị ukwuu maka ire ngwaahịa na ndị ọrụ ya
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Google na akwado iji mepee ulo ahia nke izizi